University of Stuttgart - Higher Education na European University
University of Stuttgart Nkọwa
tọrọ ntọala : 1829
Echefukwala atụle University of Stuttgart
Idebanye aha na University of Stuttgart
The University of Stuttgart na nsogbu nke dị n'etiti ndị a ukwuu omimi nke akụ na ụba mpaghara na a zuru ụwa ọnụ aha ọma ka Rut ke ubi nke mobile na ọmụma technology, mmepụta, usoro injinịa nakwa ná ndụ sayensị. The University of Stuttgart e hiwere na 1829, na mmalite nke ulo oru afọ na Europe, ma na-eme ememe ya 175-nke ncheta na 2004. The imekọ ihe ọnụ dị n'etiti oru, anụ ahụ na ụmụ mmadụ na sayensị ka mgbe niile uru nke University of Stuttgart. Taa mahadum bụ oge a na, ihe nweta-orientated alụmdi na a keukwu nso nke na-achị na a na-elekwasị anya ọrụaka ma anụ ahụ ọzụzụ. Anya abụghị nanị "ọrụ-nzere", ma “technology, ihe ọmụma na-akụziri ndị mmadụ ", dị ka ụkpụrụ nduzi nke University of Stuttgart-ekwu.
The ego si mpụga ego, nke bụ mgbe niile dị elu, bụ gburugburu 193 nde Euro iri na ato na 2013 na-egosi, na University na-a ukwuu chọọ-mgbe onye site na mba na German, steti na onwe ego na òtù site na aku na uba. Karịrị 5.000 ọrụ na-arụ ọrụ na-elekọta 150 institutes,10 n'ahụ na Central oru; a na-eme ka University of Stuttgart otu nke kasị ukwuu n'ọrụ nke region. Ugbu a, 27.200 ụmụ akwụkwọ na-aha, 3.000 ụmụ akwụkwọ gụchara kwa afọ na-amalite ọkwá ha. Ọzọkwa, banyere 60 trainees si n'ọtụtụ alaka-azụ n'ihi na ha na-arụ ebe a. Ha na-aghọ ndu laabu technicians, cabinetmakers na ọtụtụ ndị ọzọ trades – na mahadum noo, laboratories na ọfịs.
Dị ka campus mahadum na abụọ ọma ejikọrọ ọnọdụ, nso mara mma ntụrụndụ, ohere na gburugburu ebe obibi na anya ike na omenala ndụ nke obodo, mahadum enye ihe kasị mma na ọnọdụ na-amụ na-arụ ọrụ dị ka nke ọma dị ka a di iche iche nke ọrụ Ohere maka na-agụsị akwụkwọ. Ọnụ na oge a na ozi teknụzụ, ala gọọmenti rụrụ na ụlọ maka ọbịa nkụzi, ndị agbata obi oru nke Max Planck-, na Fraunhofer Institute na German Aerospace Center mejupụtara a tụụrụ n'ala n'ihi innovations na nkà mmụta sayensị na nkwurịta okwu. Na ndị chọrọ ịchọta a ụlọ ọrụ na ọhụrụ ha etu esi pụrụ inweta nkwado na ọfịs na mpaghara center maka technology. Na what`s ọzọ, àgwà nke ndụ na-elu: The maa mma ọnọdụ nke Stuttgart n'etiti oké ọhịa na ubi-vine, na Swabian Ugwu na Black Forest na ha mara mma omume ntụrụndụ na a dịgasị iche iche nke omenala ihe – si balet na-variète – eme ka ịdị ndụ n'ebe a dị ka ihe ụtọ.
Isi mesiri ike nke University of Stuttgart bụ na injinịa na eke na sayensị. Otú ọ dị, na ijikọta ebe ndị a na Humanities na-elekọta mmadụ na sayensị na-agbakwụnye ihe pụrụ iche na ya profaịlụ.
Egosi nke magburu onwe ọnọdụ bụ abụọ oru ya na ha ịga nke ọma na-adịbeghị anya "Ọkasị Initiative" nkwado ma ndị Federal na State ọchịchị. One oru ngo bụ Ụyọkọ Ọkasị "Ịme anwansị Technology" na nke ọzọ, na Graduate School "Advanced Manufacturing Engineering". Anyị na-arụkwa ọtụtụ collaborative Research Centres na Research Ọzụzụ Otu dị iche iche. Ọzọ pụrụ iche oru ngo bụ Research CampusARENA2036, na-enye a ikpo okwu maka nnyocha si institutes na ụlọ ọrụ ndị na-arụkọ ọrụ na Synergy na isiokwu nke Production na fechaa owuwu.
The nnyocha na-eme na-lekwasị gburugburu asatọ interdisciplinary ebe, "Modelling na Ịme anwansị Technology", "New Materials", "Mgbagwoju Systems na Communication", "Concepts of Technology na Technology Evaluation", "Energy na Environment", "Agagharị", "Integrated Product Design na Production Organisation" nakwa dị ka "Building na Housing". The Universität Stuttgart na-aga-eme ka ya research site interdisciplinary netwọk nke imekọ ihe ọnụ iji nọgide na-mụbaa na ọnwụ onu inyere ndị ubi.
The University of Stuttgart na-aga na abawanye ya mba ọnụnọ na-etinye uche n'isiokwu na-of Central mkpa ga-eme n'ọdịnihu. Behind a bụ ọhụụ nke n'ịmalite ọrụ nnyocha na dum ndụ-ozuzo nke a ngwaahịa. Nke a amalite na molekụla nlereanya, aga n'ihu site na ihe onwunwe na usoro-etoju on imewe, mmepụta na itinye n'ọrụ, na-agwụ na imegharị ihe maka iji usoro. Nke a na-agụnye ọ bụghị nanị na teknuzu engineering, mmejuputa iwu kamakwa nwale nke na nkwado nke teknuzu innovations.
-Agụsị akwụkwọ nke University of Stuttgart na-akwadebe maka mba mpi site anọ ná mba ọzọ na ihe ọtụtụ nwe-na okokporo ọmụmụ nke ọmụmụ na English asụsụ. Na òkè nke mba ụmụ akwụkwọ (20%) bụ n'ebe dị elu karịa nkezi. Right ha malitere Germany mba ọzọ ụmụ akwụkwọ na-e-elekọta na a pụrụ iche welcome omume. An Alumni omume iji nyere na-akpọ mahadum mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ.
Architecture na Urban Planning
Civil- na Environmental Engineering
Energy Technology, Usoro Engineering na Biological Engineering
Kọmputa sayensị, Ọdụdọ Engineering, na Ozi Technology
Aerospace Engineering na Geodesy
Engineering Design, ProductionEngineering na Automotive Engineering
Mathematics na Physics
site 1770 ka 1794, na Karlsschule ahụ bụ nke mbụ mahadum na Stuttgart. Emi odude ke Stuttgart-Hohenheim, o nwere ebe ọ bụ na 1818 e University of Hohenheim na-adịghị metụtara ndị University of Stuttgart, ma e wezụga n'ihi na ụfọdụ na nkwonkwo na-eme.
Ihe a na ndị University of Stuttgart e hiwere na 1829, na-eme ememe ya 175th ncheta na 2004. N'ihi ịba ụba mkpa nke teknuzu sayensị na ntụziaka ndị a na ubi, si 1876 mahadum a maara dị ka ndị na ụzụ College. na 1900 ọ e ọdịda nke n'aka inye doctoral degrees na technical ọzụzụ. Mmepe nke ọmụmụ nke ọmụmụ na ụzụ College of Stuttgart dugara ya renaming na 1967 na n'oge a “University of Stuttgart”. Na nke a mgbanwe nke aha bịara tinyere a wuru na-elu nke ọhụrụ ubi, dị ka akụkọ ihe mere eme nke sayensị na nkà na ụzụ na-elekọta mmadụ na sayensị, na ndọtị nke ẹdude ndị, dị ka akụkọ ihe mere eme na nkà akụkọ ihe mere.
Ebe ọ bụ na ọgwụgwụ nke 1950s, a akụkụ nke mahadum e odude na esịt Stuttgart-Vaihingen. Ọtụtụ oru achị (kọmputa sayensị, engineering, wdg) na-dị na Vaihingen, mgbe Humanities, na-elekọta mmadụ na sayensị, ije, na yiri isiokwu ka na-emi odude ke obio center campus.
Ị chọrọ atụle University of Stuttgart ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Stuttgart na Map
photos: University of Stuttgart ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Stuttgart.